Rita, Writing for My Sake!: လက်ရှိ အတွေးများ
Posted by Rita at 11/18/2010 01:46:00 PM
နံပါတ် (၂)၊ (၃)၊ (၅) ရဲ့ အတွေးတွေက ရင်ထဲ နက်ရှိုင်းစွာ နစ်ဝင်သွားတယ်။
Event Prudent Leader not able to do as your thought.
ကိုယ်လေးစားတဲ့ လူရဲ့ (သတ္တိကို လိုက်မမီတောင်) စိတ်နေသဘောထား၊ အမူအကျင့်ကို ခြေရာနင်းနိုင်မှပဲ 'လေးစားတယ်' လို့ပြောတာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ထင်
'လေးစားတယ်' is better than nothing.
It difficult to followed the succeeded person due to some restriction.
ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်အခန့်မသင့်စရာနဲ့ ကြုံရပြီဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ နှမြောစရာကောင်းတဲ့အရာ တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါ 'ပိုက်ဆံ' မဟုတ်ဘူး။ လွယ်လင့်တကူ ထွက်လာတဲ့ 'ကူညီချင်တဲ့ စိတ်စေတနာ'။
I fully respect your kind.
I do understand the situation ofalittle Myanmar in Singapore.
Help them by all available means as much as you can.
ကျွန်မအမြင် လေးစားတယ် ဆိုတာ ပါးစပ်က ထွက်ရတဲ့ စကားလုံးသက်သက်လို့ မထင်လို့ပါ။
သူ့လေးစားပါတယ် လေးစားပါတယ်ဆိုပြီး ချိုးချလိုက်တဲ့ အချိုး၊ လုပ်ပြလိုက်တဲ့ အထာ၊ စိတ်နေသဘောထားက ဟိုဘက်ကဟာတွေအတိုင်း ဆိုရင်တော့ ဘာမှမပြောတာကမှ ပိုကောင်းဦးမယ်။ သူ့လို လိုက်လုပ်ရမယ် ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တာကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သတ္တိကိုတောင် ချွင်းချက်လုပ်ထားတယ်။ သူ သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့ နားလည်ဖို့လိုတယ် ထင်တယ်။ စိတ်နေသဘောထားနဲ့ တုန့်ပြန်ပုံ တုန့်ပြန်နည်းကတော့ သူ့လမ်းစဉ်ယုံလို့ သူ့နောက်လိုက်နေမှတော့ သူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလို့ မသင့်ဘူးထင်တာပါပဲ။ အဲလိုအချိုးချိုးနေမယ်ဆိုရင် အဲဒါ လေးစားတာမှ မဟုတ်တာ၊ အိုးမဲသုတ်သလိုတောင် ဖြစ်နေဦးမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ nothing is better than အိုးမဲသုတ် လို့ပဲ ပြောရတော့မယ် ထင်တယ်။
မနှစ်ကရောက်လာတဲ့ 'လေရူးသုန်သုန်' ကို ဒီနှစ်မှ ဖတ်ဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲတွေအကြောင်း စိတ်ထဲမှာ တွေးမိတယ်။ လူတွေ အများကြီးရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် စိတ်ဓါတ်၊ ဘဝတွေ အပျက်ခံ စစ်ဖြစ်ပြီးမှသာ တခုခု ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်
You have to read War and Peace.
You can accept or reject "RIGHT IS MIGHT"
If you don't have power, money you will loose.
The most teachers supported the most smart students. Punished to weaker students.
Every society are almost the same thing.
အရင်က ရုပ်ရှင်ထဲမှာ actor တွေ ဆေးလိပ်သောက်ပြတာဟာ ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကို လိုက်သောက်ဖို့ ဆွဲဆောင်ရာရောက်တယ်တို့ ဘာတို့ သိပ်လက်ခံလို့ မရဘူး။
but I still not accepted in this case.
Most peoples followed by actor due to unstable of themselves.
So Govt. prohibited cigarette advertising.
၃ နဲ့ ၄ ကို သဘောကျတယ်
တို့ကတော့ အိမ်ရှင်မဆိုတော့ ၁ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ၁ က သိပ်မှန်ပါတယ် ရီတာရေ။